Collar Bone လှလှလေးပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီယောဂလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလုပ်ပေးသင့် – Trend.com.mm
Collar Bone လှလှလေးပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီယောဂလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလုပ်ပေးသင့်
Collar Bone ဆိုတာ လှပခြင်းအမှတ်အသားတစ်ခုလိုပါပဲ။Collar Bone ရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေဆို off-shoulder လေးတွေပဲဝတ်မလား ၊ဖန်စီဆွဲကြိုးလေးတွေပဲဝတ်မလား သူတို့ကို ပိုပြီးလှပအောင်ပံ့ပိုးပေးနေသလိုပါပဲ။တကယ်တော့ မိန်းကလေးတိုင်းမှာ Collar Bone ဆိုတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပိန်သွယ်တဲ့မိန်းကလေးတွေမှာတော့ ပိုပြီးတွေ့မြင်ရတာပေါ့။
တစ်ချို့မှာ Collar Bone မတွေ့ရဘူးဆိုတာ လည်ပင်းနဲ့ပုခုံးတစ်ဝိုက်မှာအဆီပိုတွေရှိနေလို့ပါတဲ့။
Collar Bone ရှိတာက မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုပါပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မထင်မရှား ဖြစ်နေတဲ့ Collar Bone ကို ဒီယောဂလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလုပ်ပြီး ထင်ရှားပေါ်လွင်အောင်လုပ်ပေးသင့်ပြီနော်။ဒီရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေက သင့်အတွက် လှပတဲ့ Collar Bone ကိုယူဆောင်လာပေးမှာပါ ❤
ဒီယောဂလေ့ကျင့်ခန်းလေးက သင့်ရဲ့ ပုခုံးမှာရှိတဲ့အဆီပိုတွေကိုဖယ်ရှားပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအနေအထားအတိုင်း ၁မိနစ်လောက်နေပါ။စစချင်း ၁မိနစ်မရရင်လည်း အရမ်းကြီးအားမစိုက်ပါနဲ့။နောက်နေ့တွေမှာဖြည်းဖြည်းချင်း ကြိုးစားသွားပါ။
ဒီလို Plank လုပ်တာနဲ့တူတဲ့ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းအရိုးတွေကိုသန်မာစေပါတယ်။ပြီးတော့ လက်မောင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားကိုထိန်းရတာဖြစ်လို့ ပုခုံးနဲ့လက်မောင်းကြွက်သားကိုသန်မာစေပါတယ်။
ဒီလိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်ကိုအနောက်ကိုကွေးညွတ်ရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းဟာ ပုခုံးနဲ့လက်မောင်းကြွက်သားတွေကိုသန်မာစေရုံသာမက ဗိုက်ကြွက်သားတွေကိုပါကျစ်လစ်လာစေပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ဘက်ကအဆီတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက် အထိရောက်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။
ဒီလိုယောဂလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ ရင်ဘတ်နဲ့ပုခုံးကြွက်သားတွေအတွက်အထိရောက်ဆုံးပါ။ရင်ဘတ်ကြွက်သားတွေကိုဆွဲဆန့်သန်မာစေပြီး ပုခုံးကအဆီတွေကျစေပါတယ်။
ဒါကတော့ Plank လုပ်သလိုမျိုးပဲ။ဒါပေမဲ့ ပုံစံတော့မတူပါဘူး။ဒီလေ့ကျင့်ခန်းဟာ ပုခုံးကြွက်သားတွေကိုသန်မာစေပြီးအနောက်ဘက်လက်မောင်းကြွက်သားတွေကိုသန်မာကျစ်လစ်စေပါတယ်။ခါးအနီးတစ်ဝိုက်ကြွက်သားတွေကို ကျစ်လစ်အောင်ကူညီပေးနိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပါ။
ဒါကတော့ collar Bone အတွက်နောက်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပါ။ဒီလိုယောဂလေ့ကျင့်ခန်းက နောက်ကျောဘက်ကြွက်သား၊ပုခုံး၊လက်မောင်းကြွက်သား၊ရင်ဘတ်ကြွက်သားတွေကို သန်မာစေတဲ့ထိရောက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပါ။ခန္ဓာကိုယ်ကိုပါပျော့ပျောင်းစေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလို့
ဒီယောဂလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုနေ့တိုင်းဖြစ်စေ၊တစ်ပတ်ကို ၅ရက်လောက်ဖြစ်စေ လုပ်ပေးပါ။ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုစီကို တစ်မိနစ်ကနေ ၂မိနစ်လောက်ထိထိန်းနိုင်လာမယ်ဆိုရင် မကြာခင်မှာ Collar Bone လှလှလေးထင်ရှားပေါ်လွင်လာမှာမလွဲပါဘူးနော်။ကဲ Collar Bone လှလှလေးပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက် ကြိုးစားလိုက်ရအောင် ဖိုက်တင်း !!! ❤
Collar Bone ဆိုတာ လှပခွငျးအမှတျအသားတဈခုလိုပါပဲ။Collar Bone ရှိတဲ့မိနျးကလေးတှဆေို off-shoulder လေးတှပေဲဝတျမလား ၊ဖနျစီဆှဲကွိုးလေးတှပေဲဝတျမလား သူတို့ကို ပိုပွီးလှပအောငျပံ့ပိုးပေးနသေလိုပါပဲ။တကယျတော့ မိနျးကလေးတိုငျးမှာ Collar Bone ဆိုတာရှိပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ခန်ဓာကိုယျပိနျသှယျတဲ့မိနျးကလေးတှမှောတော့ ပိုပွီးတှမွေ့ငျရတာပေါ့။
တဈခြို့မှာ Collar Bone မတှရေ့ဘူးဆိုတာ လညျပငျးနဲ့ပုခုံးတဈဝိုကျမှာအဆီပိုတှရှေိနလေို့ပါတဲ့။
Collar Bone ရှိတာက မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ ဆှဲဆောငျမှုတဈခုပါပဲ။အဲ့ဒါကွောငျ့သငျ့ရဲ့မထငျမရှား ဖွဈနတေဲ့ Collar Bone ကို ဒီယောဂလကေ့ငျြ့ခနျးလေးတှလေုပျပွီး ထငျရှားပျေါလှငျအောငျလုပျပေးသငျ့ပွီနျော။ဒီရိုးရှငျးလှယျကူတဲ့ယောဂလကေ့ငျြ့ခနျးလေးတှကေ သငျ့အတှကျ လှပတဲ့ Collar Bone ကိုယူဆောငျလာပေးမှာပါ
ဒီယောဂလကေ့ငျြ့ခနျးလေးက သငျ့ရဲ့ ပုခုံးမှာရှိတဲ့အဆီပိုတှကေိုဖယျရှားပေးပါလိမျ့မယျ။အဲ့ဒီအနအေထားအတိုငျး ၁မိနဈလောကျနပေါ။စစခငျြး ၁မိနဈမရရငျလညျး အရမျးကွီးအားမစိုကျပါနဲ့။နောကျနတှေ့မှောဖွညျးဖွညျးခငျြး ကွိုးစားသှားပါ။
ဒီလို Plank လုပျတာနဲ့တူတဲ့ယောဂလကေ့ငျြ့ခနျးဟာ သငျ့ခန်ဓာကိုယျအပျေါပိုငျးအရိုးတှကေိုသနျမာစပေါတယျ။ပွီးတော့ လကျမောငျးနဲ့ခန်ဓာကိုယျအနအေထားကိုထိနျးရတာဖွဈလို့ ပုခုံးနဲ့လကျမောငျးကွှကျသားကိုသနျမာစပေါတယျ။
ဒီလိုမြိုးခန်ဓာကိုယျကိုအနောကျကိုကှေးညှတျရတဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးဟာ ပုခုံးနဲ့လကျမောငျးကွှကျသားတှကေိုသနျမာစရေုံသာမက ဗိုကျကွှကျသားတှကေိုပါကဈြလဈလာစပေါတယျ။ခန်ဓာကိုယျအပျေါဘကျကအဆီတှကေိုဖယျရှားဖို့အတှကျ အထိရောကျဆုံးလကေ့ငျြ့ခနျးတဈခုလို့တောငျပွောလို့ရပါတယျ။
ဒီလိုယောဂလကေ့ငျြ့ခနျးကတော့ ရငျဘတျနဲ့ပုခုံးကွှကျသားတှအေတှကျအထိရောကျဆုံးပါ။ရငျဘတျကွှကျသားတှကေိုဆှဲဆနျ့သနျမာစပွေီး ပုခုံးကအဆီတှကေစြပေါတယျ။
ဒါကတော့ Plank လုပျသလိုမြိုးပဲ။ဒါပမေဲ့ ပုံစံတော့မတူပါဘူး။ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးဟာ ပုခုံးကွှကျသားတှကေိုသနျမာစပွေီးအနောကျဘကျလကျမောငျးကွှကျသားတှကေိုသနျမာကဈြလဈစပေါတယျ။ခါးအနီးတဈဝိုကျကွှကျသားတှကေို ကဈြလဈအောငျကူညီပေးနိုငျတဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးတဈခုပါ။
ဒါကတော့ collar Bone အတှကျနောကျဆုံးလကေ့ငျြ့ခနျးတဈခုပါ။ဒီလိုယောဂလကေ့ငျြ့ခနျးက နောကျကြောဘကျကွှကျသား၊ပုခုံး၊လကျမောငျးကွှကျသား၊ရငျဘတျကွှကျသားတှကေို သနျမာစတေဲ့ထိရောကျတဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးတဈခုပါ။ခန်ဓာကိုယျကိုပါပြော့ပြောငျးစတေဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးတဈခုလို့
ဒီယောဂလကေ့ငျြ့ခနျးလေးတှကေိုနတေို့ငျးဖွဈစေ၊တဈပတျကို ၅ရကျလောကျဖွဈစေ လုပျပေးပါ။ယောဂလကေ့ငျြ့ခနျးတဈခုစီကို တဈမိနဈကနေ ၂မိနဈလောကျထိထိနျးနိုငျလာမယျဆိုရငျ မကွာခငျမှာ Collar Bone လှလှလေးထငျရှားပျေါလှငျလာမှာမလှဲပါဘူးနျော။ကဲ Collar Bone လှလှလေးပိုငျဆိုငျဖို့အတှကျ ကွိုးစားလိုကျရအောငျ ဖိုကျတငျး !!!
ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီး ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေလည်း လုပ်ထားတယ်လို့ထွက်နေတဲ့ ကောလဟာလတွေ ကိုတုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့ Goo Hye Sun